BURMA: Online News & Analysis: အနှစ်၂၀ ပြည့် တရုတ်နိုင်ငံ တီယန်မင် အရေးအခင်း
ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ 04 2009 14:21 - မြန်မာစံတော်ချိန်
၁၉၈ဝ ခုနှစ် ပတ်ဝန်းကျင်ကာလမှာ တရုတ်နိုင်ငံဟာ တရုတ်ကွန်မြူနစ် ပါတီရဲ့ ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ ဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ ဘာသာရေး ဖိနှိပ်မှုတွေ၊ စီးပွားရေးကပ်ဆိုက်မှုတွေ၊ ကွန်မြူနစ်ပါတီ နှင့် အစိုးရအတွင်း အကျင့်ပျက်ချစားမှုတွေ၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုတွေ၊ လူအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ၊ ဒေသတွင်း မတည်ငြိမ်မှု အကျပ်အတည်းတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရတယ်။
တနည်းအားဖြင့် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင်တွေအကြားမှာ သူ့ကို ဆိုဗီယက် ကွန်မြူနစ်ပါတီကို ယိမ်းယိုင်သူ၊ ဆိုဗီယက်ကွန်မြူနစ်ပါတီ အထွေအထွေ အတွင်းရေးမှူး မီခေးဂိုဘာချော့ဗ်ရဲ့ အတွေးအခေါ်ကို လက်ခံယုံကြည်သူလို့ စွပ်စွဲမှုတွေ ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်က ဆိုဗီယက် ကွန်မြူနစ်ပါတီ အထွေအထွေ အတွင်းရေးမှူး မီခေးဂိုဘာချော့ဗ်ဟာ သူ့ရဲ့ Glasnost (Openness) နှင့် Perestroika (Restructuring) ကို ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စုအတွင်း အားပေးလုပ်ဆောင်နေချိန်မို့၊ တရုတ်နည်း တရုတ်ဟန်နဲ့ ချီတက်လိုကြတဲ့ ရှေးရိုးစွဲ အစွန်းရောက် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင်တွေအကြား ဒီလိုစွပ်စွဲမှုတွေ ရှိခဲ့ကြတာပါ။
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဟူယောင်ဘန်းကို ၁၉၈၇ ခုနှစ်မှာ ပါတီမှ အတင်းအကျပ် အနားပေးခဲ့စဉ်က တရုတ် ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ၊ တက္ကသိုလ် ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမတွေက တီယန်မင်စကွဲမှာ ဆန္ဒပြမှု အနည်းအကျဉ်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ် တီယန်မင်စကွဲ ဆန္ဒပြပွဲမှာ ပီကင်းတက္ကသိုလ် ကျောင်းဆရာမ တယောက်က အခုလို ဟောပြောခဲ့တာ မှတ်မိပါသေးတယ်။ “ငါတို့ ကမ္ဘာကြီးကို သိစေချင်တယ်။ ငါတို့ဟာ ငါတို့ တိုင်းပြည်မှာ အကျဉ်းသားတွေ ဖြစ်နေကြပြီ” – “ We want the world to know that we are prisoners in our own country.” သူမရဲ့ ဟောပြောလှုံ့ဆော်မှုဟာ တရုတ်လူငယ်တွေ၊ ဒီမိုကရေစီလိုလားသူတွေ၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လိုလားသူတွေ အနေနဲ့ တရုတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီအတွင်း သဘောထားတင်းမာသူတွေကို ဆန့်ကျင်ကြဖို့ တပ်လှန့်နှိုးဆော်ခဲ့တယ်။
Zhao Ziyang speaks on 19 May 1989. Behind him, the State Council Premier, Wen Jiabao, is present (2nd from right in black). This was Zhao's last public appearance before he was placed under house-arrest, where he remained until his death
၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဟူဟာ နှလုံးရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။ တီယန်မင်စကွဲယားမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ ဈာပနအခမ်းအနားကို တရုတ်လူငယ်များ၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ၊ ပညာတတ် လူလတ်တန်းစားများ၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လိုလားသူတွေက မကျေမနပ်ဖြစ်ကာ စတင်ဆန္ဒပြမှုတွေကို ပြုလုပ်လာခဲ့ကြတယ်။ ဒီဆန္ဒပြပွဲကို ဟူယောင်ဘန်း (Hu Yaobang) ရာထူးကို ဆက်ခံခဲ့သူ ကျောက်ကျိယန် (Zho Ziyang) လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့ ခံစားချက်တွေကို နားလည်ပါကြောင်းနဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေကို ရပ်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့တယ်။ ဆန္ဒပြသူတွေကို စာနာစိတ်ပြသခဲ့မှုကြောင့် တရုတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီက အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ကျောက်ကျိယန် (Zho Ziyang) ကို ကွယ်လွန်တဲ့အထိ နေအိမ်မှာ အကျယ်ချုပ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်း ခံခဲ့ရသလို၊ ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာလည်း တနေ့ထက်တနေ့ ကြီးထွားလာခဲ့တာပါ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဆန္ဒပြမှုတွေကို တရုတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီ အမိန့်အာဏာအရ စစ်တပ်က ဖြိုခွဲခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။
တီယန်မင် အရေးအခင်း ဖြစ်ပွားပြီးနောက် တရုတ်နိုင်ငံမှာ ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းကော၊ မူဝါဒအပိုင်းပါ သိသာထင်ရှား တိုးတက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ၈ လေးလုံး အရေးတော်ပုံအပြီး အနှစ် ၂ဝ ကာလမှာ ခေါင်းဆောင်မှုမပြောင်း၊ မူဝါဒ မပြောင်းသေးဘဲ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ နအဖ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေက ဆက်လက် ကြိုးစားနေကြဆဲပါ။ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာ မဟာတံတိုင်းကြီးနောက်ကွယ်ကနေ ဘယ်လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ပြုလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
မဟာတံတိုင်းကြီး နောက်ကွယ်က ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ
Publish at Scribd or explore others: Other democracy Human Rights
Posted by Burma Golf Club at 1:58 PM